फोरम र राजपा नेपालबीच सहमतिः कसले कति मन्त्रालय पाए ? - Everest Dainik - News from Nepal
फोरम र राजपा नेपालबीच सहमतिः कसले कति मन्त्रालय पाए ?
काठमाडौं, माघ २८ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच सहमति भएको छ । फोरम नेपालले मुख्यमन्त्री र उपसभामुख सहित तीनवटा मन्त्रालय र राजपा नेपालले सभमुख सहित तीनवटा मन्त्रालय बाँडफाँड गरेको छ ।
फोरम नेपालले , समाजिक सुरक्षा र कृषि मन्त्रालय सहित तीन मन्त्रालय पाएको छ भने राजपा नेपालले भौतिक योजना, समाजिक विकास र पर्यटन मन्त्रालय गरी तीन मन्त्रालय पाएको छ । फोरम नेपालको पार्टी कार्यालय तीनकुनेमा यी दुई दलको बीचमा छलफल भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस फोरम र राजपाबीच तत्काल पार्टी एकता : राजेन्द्र महतो
यसअघि माघ २३ गते जनकपुरमा यी दुई दलको बीचमा भएको छलफल भएको थियो । सो छलफलमा राजपा नेपालले तीन बुँदे प्रस्ताव राखेको थियो ।
मुख्य मन्त्री र दुई मन्त्रालय, सभामुख र चार मन्त्रालय तथा चक्रिय प्रणालीमा मुख्य मन्त्री गरी तीन प्रस्ताव राखेको थियो । यी प्रस्ताव प्रति फोरम नेपाल सकारात्मक थिएन । आज छलफल हुँदा चक्रिय प्रणाली हटाएर तीन तीन मन्त्रालयमा सहमति गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस कांग्रेसद्वारा चुनावी तालमेलबारे विभिन्न दलसँग छलफल
फोरम नेपालले पाउने मन्त्रालयहरू
मुख्यमन्त्री, उप सभामुख, आन्तरिक मामला (गृह) तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय,अर्थ तथा योजना मन्त्रालय ।
राजपाले पाउने मन्त्रालयहरू
सभामुख, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र समाजिक विकास मन्त्रालय
ट्याग्स: Rajapa and Forum